လူများ၏ ၅၇% သည်သင့်ကိုအကြံပြုနေခြင်းမဟုတ်ပါ Martech Zone
လူ ဦး ရေ၏ ၅၇% သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားသင့်အားအကြံပေးခြင်းမရှိပါ ညံ့ဖျင်း optimized မိုဘိုင်းက်ဘ်ဆိုက်။ ဒါကနာပါတယ် ... ငါတို့သိတယ် Martech Zone သူတို့ထဲကတစ်ခုပါ! ကျွန်ုပ်တို့တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိုဘိုင်း application ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သိသည် Jetpack စံကသူတို့ကိုမိုဘိုင်းအီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုကြည့်ရှုရန်နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ဆက်လက်အဖြစ် analyticsမိုဘိုင်းအတွက်အသုံးမပြုသင့်သောကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများထံသူတို့လာရောက်လည်ပတ်သည့်အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးအပေါ်အမှန်တကယ်အားနည်းနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည်။ အချို့ဆိုလျှင်ဤဆိုဒ်ကဲ့သို့မိုဘိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခင်းအကျင်းတစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်သောဆိုဒ်များရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ရလဒ်ကောင်းများကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရပါ။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြီးမြတ်သူတွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တယ် ထွက်ပေါက် 31 မှာဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ တုန့်ပြန်မယ့်လုံးဝအသစ်သောဆောင်ပုဒ်ကိုထုတ်တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်။
သင့်အနေဖြင့်ဤအရာကို laptop သို့မဟုတ် desktop ပေါ်တွင်ထက်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်တွင်ပိုမိုဖတ်ရှုကောင်းဖတ်နိုင်သည် (အနည်းဆုံး stats အရသိရသည်) ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံးလျင်မြန်စွာမြင့်တက်နေသော်လည်းနားလည်ရခက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ချောင်းထိပ်နားတွင်အင်တာနက်လိုအပ်သောကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြပြီးစမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များသည်ခက်ခဲသောလက်ပ်တော့များနှင့်စားပွဲခုံများထက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများကိုတသမတ်တည်း (နှင့်ပိုမိုထိရောက်သော) ပေးနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းအတွက်သာအင်တာနက်အသုံးပြုသူs - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၂၃% သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများသာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရှာဖွေရန်အတွက် desktop ကွန်ပျူတာကိုပင်အသုံးမပြုပါ။
မိုဘိုင်းရှာဖွေမှု - ရှာဖွေမှု ၄ ခုတွင် ၁ ခုသည်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်ပြုလုပ်သည်။
မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှု - ၉၈% သောလူများမှာအိမ်မှမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုကြပြီး ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာခရီးသည်များဖြစ်သည်။ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာစျေးဝယ်ထွက်နေစဉ်၊ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်အလုပ်ခွင်တွင် ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုကြသည်။
အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၄၀၀ အထိရောက်ရှိလိမ့်မည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တစ် ဦး တည်း!
Tags: android ဖုန်းထွက်ပေါက် ၃၁iphoneမိုဘိုင်း optimizationမိုဘိုင်းရှာဖွေမှုမိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မိုဘိုင်းသာအသုံးပြုမှုတုံ့ပြန်မှုဆိုဒ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationစမတ်ဖုန်းတက်ဘလက်မိုဘိုင်းကိုအသုံးပြုသည်အခါwindows မိုဘိုင်းwsi